कसरी YouTube मा लगातार भिडियो प्ले गर्ने ग्याजेट समाचार
कसरी लगातार YouTube भिडियो प्ले गर्ने
कसैले पनि यसलाई याद गर्दैन यूट्यूब मुख्य प्लेटफर्म हो जहाँ हामी व्यावहारिक रूपमा हामीले खोजिरहेका कुनै पनि प्रकारका भिडियोहरू फेला पार्न सक्छौं। याहूले केहि समयका लागि नयाँ प्लेटफर्म सिर्जना गर्न कोशिस गरिरहेको छ, गेमरहरूलाई आकर्षित गर्दै यस प्लेटफर्मले छिटो लोकप्रियता प्राप्त गर्दछ तर अहिलेको लागि यसका लागि धेरै कम्पनीहरू खरीद गरिसकेपछि पनि यो सफल हुन सकेको छैन।
केही हप्ता अघि हामीले व्याख्या गरेका थियौं १ चरणमा कसरी YouTube मा भिडियोहरू दोहोर्याउने। यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई नयाँ विकल्पहरू प्रदान गर्नेछौं निरन्तर हाम्रो भिडियोहरू दोहोर्याउन सक्षम हुनु YouTube मा मनपर्नेहरू। तल हामी तपाईंलाई नयाँ विकल्पहरू प्रस्ताव गर्दछौं
विकल्प १. प्लेलिस्ट सिर्जना गर्नुहोस्।
कस्टम प्लेलिस्टमा भिडियोहरू थप्ने बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि यसले हामीलाई दोहोरिने मोड वा अनियमित प्लेब्याक थप्न अनुमति दिन्छ। तपाईंको सूचीमा केवल एक भिडियो जोडियो भने फरक पर्दैन, निरन्तर प्लेब्याक मोडको प्रकार्य उस्तै हो। तर सबै चीजसँग यसको बुट्स हुन्छ र त्यो यो हो कि हामीले निरन्तर प्ले गर्न चाहेको प्रत्येक भिडियोको लागि सूची बनाउनु अलि भारी हुन सक्छ।
विकल्प २. ब्राउजर विस्तार प्रयोग गर्नुहोस्।
ब्राउजर विस्तारले हामीलाई अतिरिक्त प्रकार्यहरू थप गर्न अनुमति दिन्छ जुन पूर्वनिर्धारित रूपमा ल्याउँदैन र हामीलाई धेरै उपयोगी प्रकार्यहरू थप्नको लागि अनुमति दिदैन। सक्छ स्वचालित रूपमा YouTube भिडियोहरू प्ले गर्नको लागि तेस्रो-पक्ष विस्तार प्रयोग गर्नुहोस्। यो गर्नका लागि तपाईले तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्नेछ जुन मैले तल वर्णन गरेको छु:
क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस् र यूट्यूब एक्स्टेन्सनका लागि स्वत: रिप्ले डाउनलोड गर्नुहोस्.
एक पटक स्थापना भएपछि, एक्स्टेन्सन YouTube मा Replay भनिने बटन थप्नेछ, जो तपाईं बारेमा र साझा विकल्प बीचमा पाउनुहुनेछ।
एकचोटि हामीले रिप्लेमा क्लिक गरेपछि, मेनू प्रदर्शित हुन्छ जहाँ हामी कन्फिगर गर्न सक्दछौं कि हामी भिडियोको भाग लगातार वा पूर्ण रूपमा खेल्न चाहन्छौं। हामीले चाहेको विकल्प छनौट गरेपछि लूपमा क्लिक गर्नुहोस्।
तब भिडियो स्वचालित रूपमा प्ले गर्न सुरू हुनेछ, र यो समाप्त भए पछि यो फेरि खेल्न सुरु हुनेछ.
यो साधारण ट्रिक, हामी यूट्यूबमा हजारौं संगीत भिडियोहरूमा उपलब्ध संगीत सुन्न यो प्रयोग गर्न सक्दछौं। यो दिमागमा राख्नुहोस् यो विस्तार क्रोमको लागि मात्र उपलब्ध छ। एक राम्रो विकल्प छ यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » कसरी लगातार YouTube भिडियो प्ले गर्ने
रेट्रोभ्यू: नश्वर कोम्बत